Moolah ahee Moolah ahee
Ciyaarta ayaa booska of Moolah ahee by Microgaming Inc. waa dhameystiran oo loo baahan yahay in aad elate si muhiimka ah oo dhan oo siinaya waayo-aragnimo ah in waxaa laga yaabaa in aad marka hore ka mid ah, ama haddii aad ahayd booqdaha joogto ah casino zone ciyaaraha Afyare. The sawiro kala duwan, xitaa RTP celcelis ahaan 88.12%, maamushaa in uu soo jiito ciyaartoyda ay sabab u tahay horumar jaakbotyada muuqan in ay bixisaa oo caddayn karaan in ay nolol-beddelo yar nasiib.
Microgaming Inc. waa mulkiilaha oo dhan oo baabacada of this ciyaarta booska la yaab leh gurato ah- Moolah ahee. Kooxdu waxay of horumarinta ku salaysan yihiin ee Isle of Man, taas oo ku tiirsanaanta ah taajka yar dhexeeya England iyo Ireland. Guud ahaan ay palette ah been badan oo kulan abuuray baxay mawduucyada sida xayawaanka, Jinku, caruusadaha, basaasyo, meydadka biyaha, taariikhda iyo wixii aan! Sayidka, waxay yabooho soo baxay oo dibadda u raaxayn in ciyaartoyda la danaha kala duwan, in kulan ay.
Moolah ahee la dhigay guud ahaan in 5 a×3 ambadeen set. Iyada oo shan iyo labaatan paylines, ma aha mid aad u adag, waayo, ciyaaryahan si ay u helaan qaar ka mid ah lacag deg deg ah tan iyo xeerarka kale oo jira fudud quruxsan. Waxa kale oo uu leeyahay wheel dheeraad ah bonus ahee maal aad ku kasban kartaa haddii aad u maleynayaa in tirada saxda ah ee pointer ee giraangirta.
Astaanta duurjoogta ah ama libaaxa hubisaa multiplier a of 2x lacag kaga badiyeen haddii ay u muuqato in ugu yaraan set oo ah laba payline firfircoon. Muuqashada 2, 3 ama 4 libaax ee line guusha aad kasbada 15, 125, iyo 1500 qadaadiicda siday u kala horreeyaan. safafka sharadka ka 1 in 5 per payline. Sidoo kale, haddii duurka u muuqataa in mid ka mid ah line guusha, lacagta guushii uu labanlaabmay.
asalka baraha duud xaqse cagaaran leh calaamado xoolaha sida gariga, maroodi, midii, buffaloes, Soo bixitaanka, oo daayeer bootimaalaysiga on sets ku ambadeen wax ka. Astaanta kala firdhiso of daanyeer caawisaa in dhalin 15 dhigeeysa lacag la'aan ah haddii ugu yaraan 3 iyaga ka mid ah wada muuqdaan. Ciyaaryahanka ayaa ka heli kartaa dhigeeysa dheeraad ah free on top oo ka mid ah 15 haddii daayeer mar kale soo muuqan in set of 3 inta lagu guda jiro set hore ee dhigeeysa free ciyaaray. Kaararka waxaa ciyaareed ka sagaal in xiddiga ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sida calaamadaha in kulankaan. Sidoo kale, lacagta sharadka ee uu saddex laab intii lagu guda jiray dhigeeysa free wareega.
Xiisaha upsurging in booska this si cad u yimaado sabab u ahaa ciidanka dalka muuqaalada bonus ee ciyaarta this, Ghanna ugu ahee cadeyneysaa sida midda ku hawlan. Ciyaarta ayaa waxaa soo jiitay saaxiibbo badan casino dunida oo dhan.
Mad Mad Daanyeer
Wakiilka Jane Body